यो आर्थिक पेशा सधैं श्रम बजार मा मांग मा गरिएको छ कि कुनै रहस्य छ, र क्षणमा मांग कम हुनेछ मान कुनै कारण छैन। आजको संसारमा विपरीत मा, अधिक र अधिक भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, ठीक पकड गर्ने क्षमता प्राप्त र महत्त्व, वित्तीय स्रोतहरू व्यवस्थापन गर्न। यसलाई सधैं अर्थव्यवस्था को क्षेत्र मा योग्य विशेषज्ञहरु लागि चित्रमाला मा, पाठ्यक्रम, बहु-लाख डलर कारोबार छ भनेर ज्यादातर ठूलो कम्पनीहरु सम्बन्धित, र।
हामी एक पुरा को रूप, एक विज्ञान रूपमा अर्थव्यवस्था कुरा भने, हामी यस यसलाई छैन समयमा मान्छे खर्च पूर्णतया कति अन्वेषण गर्न बस असम्भव छ भनेर धेरै बहुमुखी सिस्टम छ कि भूल हुँदैन। तर, आदेश माग विशेषज्ञ मा हुन, तपाईं जानकारी को टन सिक्न हुँदैन, र यो ठीक निपटान गर्न सक्षम। यो हाम्रो समय मा उच्च शिक्षा जीवन र हरेक मानव को व्यावसायिक विकास मा एक धेरै महत्त्वपूर्ण कदम हो कि मुख्य कारण हो।
म एक उच्च शिक्षा किन चाहिन्छ?
स्नातक, मान्छे मात्र त्यो काम गर्नेछ जसमा क्षेत्र बारे धेरै सिक्छन्। सबै को पहिलो, यो स्वतन्त्र सिक्न गाह्रो परिस्थिति बाहिर प्राप्त र व्यावहारिक गतिविधिहरु सीधै सम्बन्धित छन् समस्याहरूको समाधान खोज्न छ। यो स्कूल देखि उच्च शिक्षा बीच मुख्य फरक छ।
हामी अर्थव्यवस्था कुरा भने, यो यो व्यवसाय मा सफलता को मुख्य मापदण्ड व्यावहारिक को प्राप्त ज्ञान लागू गर्ने क्षमता छ भन्ने बुझे गर्नुपर्छ। मास्को राज्य विश्वविद्यालय (आर्थिक) यो सिकाउन सक्छ। विश्वविद्यालय छनौट गर्दा, सबै विकल्पहरू राम्ररी सबैभन्दा उपयुक्त चयन र बिल्कुल व्यावसायिक गतिविधिहरु को पाठ्यक्रम मा उपयोगी हुनेछ भन्ने शिक्षा प्रकारको प्राप्त गर्न विश्लेषण हुनुपर्छ। यस लेखमा मास्को मा सबै भन्दा राम्रो आर्थिक विश्वविद्यालयहरु विस्तार वर्णन गर्दछ।
रूसी संघ को सरकार अन्तर्गत वित्तीय विश्वविद्यालय
यो वित्तीय संस्थाले देश को अग्रणी विश्वविद्यालय हो। उहाँले उचित मास्को मा आर्थिक विश्वविद्यालयहरु को दर्जा मा समावेश गरिएको छ। विश्वविद्यालय लामो इतिहास छ, र यसको अस्तित्व को सबै समय को लागि अर्थव्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रहरु मा अत्यधिक कुशल व्यवसायीक को एक विशाल संख्या उत्पादन भएको छ।
विश्वविद्यालय अन्य सबै आर्थिक अघि, 1919 मा फिर्ता स्थापित भएको थियो मास्को मा विश्वविद्यालय, र सफलतापूर्वक देखि कहिल्यै सञ्चालन गरिएको छ। उहाँले पुरानो रूसी विश्वविद्यालयहरु को एक मानिन्छ।
वर्ष 2015-2016 मा विश्वविद्यालय BRICS देशहरूको 200 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयहरु को सूची प्रवेश गरेको छ। साथै, यस स्तर वित्तीय संस्थाले मा कर्मचारीलाई बीच मांग मा एक विश्वविद्यालय को स्नातक 5th कसरी सब निर्धारण जो मूल्यांकन छ।
अक्सर पनि साँचो हो जो वित्त एकेडेमी को विश्वविद्यालय, रूपमा उल्लेख। प्रशिक्षण को क्षेत्रको बोल्ने, यो त्यहाँ अर्थशास्त्र गर्न कुनै तरिका सम्बन्धित छन् जो विभिन्न संकाय, को एक धेरै व्यापक दायरा छ कि यहाँ टिप्पण लायक छ। तिनीहरूमध्ये:
जोखिम विश्लेषण र आर्थिक सुरक्षा।
सार्वजनिक प्रशासन र वित्तीय नियन्त्रण।
अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध।
लेखा र लेखा परीक्षण।
र अन्य विभागहरु।
वित्त एकेडेमी कानुनी रूपमा मास्को मा स्थित छ, तर देश भर विश्वविद्यालय को शाखा को एक विशाल संख्या छ। Yaroslavl, क्रास्नोडार, व्लादिमीर र अरूलाई सहित 18 शहर, योग शाखा को सूची।
त्यस्ता मानिसहरूलाई यो विश्वविद्यालय को ज्ञात छात्र बीचमा छैनन्। रूपमा:
मिखाइल Prokhorov - को, पार्टी "नागरिक प्लेटफर्म" को रूसी राजनीतिज्ञ, उद्यमी र अरबपति संस्थापक।
Anton Siluanov - वित्त मन्त्री।
लेव Kuznetsov - उत्तर काकेशस लागि रूसी संघ को मन्त्री।
बेला Zlatkis - Sberbank को बोर्ड को वर्तमान उप अध्यक्ष।
र राजनीतिज्ञ र व्यवसायी अन्य चिरपरिचित।
विश्वविद्यालय 10 विभिन्न कार्यक्रम मा आर्थिक शिक्षा एमबीए को उच्चतम स्तर प्राप्त गर्न मौका छ। छैन मास्को मा सबै आर्थिक विश्वविद्यालयहरु यो मौका प्रदान गर्नुहोस्।
वित्त एकेडेमी - एक पुरा को रूप मास्को मात्र होइन तर पनि रूस मा सबै भन्दा राम्रो आर्थिक विश्वविद्यालयहरु मध्ये एक।
राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थान "अर्थशास्त्र को उच्च विद्यालय"
को HSE धेरै वर्ष को लागि सबै भन्दा प्रतिष्ठित संस्थाहरू मध्ये एक भएको र शिक्षा को स्तर, मास्को मा आर्थिक विश्वविद्यालयहरु धेरै नाघ्यो छ। यो विश्वविद्यालय यसलाई संस्था, वा वेब डिजाइन को व्यवस्थापन छ कि छैन भनेर, तरिका व्यापार संग जोडिएको छन् लगभग सबै क्षेत्रमा धेरै फरक specializations मा प्रशिक्षण प्रदान गर्दछ।
संस्थान मास्को मा स्थित छ, तर मुख्य भवन बाहेक त्यहाँ पनि सेन्ट पीटर्सबर्ग, पर्म र Nizhny Novgorod मा शाखा छन्।
जबकि अन्य आर्थिक मास्को विश्वविद्यालयहरु धेरै अधिक अनुभव पछि छैनन् HSE, एक एकदम जवान संस्था हो। विश्वविद्यालय 1992 मा स्थापित भएको थियो, र समय को यस्तो छोटो अवधिमा देश मा अग्रणी मध्ये एक बन्न व्यवस्थित। थुप्रै तरिकामा यो 1996 मा, संस्थान एक राज्य, क्रमशः, यसको विकास र वित्त सम्झौताहरू को सीधा रूस आर्थिक विकास मंत्रालय संग भयो भन्ने तथ्यलाई गर्न योगदान।
उहाँले प्रसंगवश, विश्वविद्यालय पछि थियो, rector Yaroslav Ivanovich Kuzminov, को पोस्ट लाग्छ। धेरै हदसम्म उहाँलाई धन्यवाद HSE जहाँ उहाँले आज छ विकास को एक स्तर पुगेको छ कि।
अर्थशास्त्र को उच्च विद्यालय को एक विशिष्ट सुविधा यसको युवा छ। स्तर टाइम्स उच्च शिक्षा, संकलित एकदम प्रामाणिक दर्जा एजेन्सी अनुसार, HSE संसारको शीर्ष 50 30 वर्ष पुरानो अन्तर्गत विश्वविद्यालय भाग हो।
सय एक भन्दा बढी उच्च विद्यालय दुनिया वरिपरि HSE साझेदार पाउन सकिन्छ, र त्यसैले विभिन्न क्षेत्रहरू विदेश अध्ययन प्रशस्त अवसर विद्यार्थीहरूलाई खोल्नुहोस्।
स्वाभाविक, मुख्य ध्यान अर्थव्यवस्था, र एक तरिका वा सम्बन्धित अर्को सबै विभाग छ। को HSE र सूचीमा समावेश गरिएको छ किन हो "मास्को को शीर्ष आर्थिक संस्थानहरुमा।" तर, पनि कानून, डिजाइन, फैशन, भौतिक र अन्य धेरै रोचक गन्तव्यहरू एक संकाय छ।
अर्थशास्त्र को उच्च विद्यालय देशको प्रमुख आर्थिक संस्थाहरू मध्ये एक मानिन्छ, त्यसैले यो क्षेत्रमा आफ्नो करियर निर्माण गर्न योजना गर्नेहरूका लागि एक उत्कृष्ट छनौट हो।
मास्को राज्य विश्वविद्यालय एम वी Lomonosova पछि नाम
मास्को मा सबै भन्दा राम्रो आर्थिक विश्वविद्यालयहरु सूची, MSU बारेमा भूल गर्न सक्दैन।
यो संस्थाले शायद, थाह, प्रत्येक प्रवेश्य, र लगभग सबैको त्यहाँ अध्ययन गर्न चाहन्छ। यो साँच्चै विभाग र प्रशिक्षण को क्षेत्रहरू को एक ठूलो संख्या छ जो देश, मा सबै भन्दा राम्रो विश्वविद्यालय हो। प्रत्येक दिशा मा विशेषज्ञहरु को धेरै सालाना, पाठ्यक्रम, MSU मा प्रवेश्य अर्थव्यवस्था सम्बन्धित धेरै विभाग प्रदान चयन गर्न उत्पादन, र।
MSU रूसी मूल्यांकन को बहुमत मा एक अग्रणी स्थिति धारण। यो मास्को मा आर्थिक विश्वविद्यालय स्तर मा समावेश गरिएको छ, तर, र अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूले पनि संस्थान मूल्यांकन गर्छौं। मास्को राज्य विश्वविद्यालय, संरक्षित को एक किसिम मा लगभग सबै संसारको सबै भन्दा माथि देखा पर्छ।
प्रवेश आवश्यकताहरु एकदम उच्च हो, तर परिणाम यो लायक छ। को मास्को राज्य विश्वविद्यालय मा शिक्षा को स्तर धेरै सभ्य छ, र स्नातक पछि विद्यार्थी जागिर पाउन सजिलो हुनेछ।
मास्को मा राज्य विश्वविद्यालय -, आर्थिक कानुनी वा प्राविधिक, सधैं एक शिक्षा गुणस्तर को ग्यारेन्टी। यी मास्को मा आर्थिक रुझान मा3मुख्य विश्वविद्यालय थिए। अन्तिम विकल्प सधैं सचेत हुन र व्यक्तिगत को आवश्यकता मा निर्भर गर्नुपर्छ त तिनीहरूलाई प्रत्येक, यसको फाइदा र बेफाइदा छ। तर, यो मास्को यी आर्थिक विश्वविद्यालयहरु आफ्नो दिशा मा सबै भन्दा राम्रो हुन् बुझे गर्नुपर्छ।
पेट्रोजाभोड्स्क नदी कलेज - ठेगाना र समीक्षा
प्राइमर: soils को प्रकार। soils को विशेषताहरु
रेकर्ड को ट्रान्सक्रिप्ट र यसको दर्ता लागि कारण
Communicative संस्कृति - यो के हो?
प्रयोग - रोबोट्स को समाज को बाटो।
Lois - सफलता को यो newfangled उपाय
नाक मा च्याउ: लक्षण, उपचार, फोटो
हामी घर बनाएको बनाउन। स्याउ बनाइएका जाम: कसरी खाना पकाउनु, यो स्वादिष्ट बनाउने?
इलेक्ट्रनिक सर्किट को ब्यालेन्स के हो?
घटेको सुनिंनु देखि आँखा मदत गर्छ?
Pokemon पुरातन: को सबैभन्दा शक्तिशाली जगतले को विवरण
यो एक व्यक्ति छात्र दोहोरो हुन सक्छ?
बच्चाहरु र वयस्क मा भाइरल मेनिनजाइटिस लक्षण। हामी यो रोग रोक्न सक्छ?
को Astrakhan क्षेत्र को पशु: सूची विवरण र रोचक तथ्य
ज्यूरी मशरूम संग। धेरै स्वादिष्ट
देशको कानून रूपरेखा गर्न प्रशासनिक व्यवस्था को अवधारणा